China DC Motor Linear Actuator FD13 IP66 mveliso kunye nabenzi | Ukuhlanjululwa
I-FD13 Linear Actuator iyafana ne-actuator ye-FD1, umahluko omkhulu kukulinganisa kwe-IP. I-actuator yomgama we-FD13 inomgangatho ophezulu wokukhusela indalo-IP66 kunye nengxolo ephantsi. Le IP66 actuator yomgama yenzelwe ukumelana nokungena ngokupheleleyo kothuli kunye nokukhuselwa ekuvezeni amanzi. Isetyenziswa ngokubanzi kunyango, ifanitshala, oomatshini bokuzenzela ekhaya kunye nomzi mveliso, umzekelo ibhedi yezonyango, isitulo samazinyo.
6000N (Push) / 4000N (Tsala)
ukubetha + 175mm
Ukujikeleza kwe-90 ° kuyafumaneka
Mnyama / Ngwevu
(1) Nceda ubeke phambili imodeli ye-actuator yomgama, ukubetha, ubude oburhoxisiweyo, amandla omthwalo, isantya kunye nevolthi. Ukuba abasebenzisi baneemfuno ezizodwa kusetyenziso lwendalo kunye nedatha yobuchwephesha, umzi-mveliso wethu unokuyila, kwaye kufuneka ubonise iimfuno ezithile xa ubeka iodolo.
(2) Ukuba abasebenzisi badinga izinto zokusebenza ze-actuator, ezinje ngebhokisi yolawulo, umbane kunye nolawulo olukude, umzi-mveliso wethu unokubonelela ngokuseta okupheleleyo, ikwanokubonelelwa yodwa.
(3) Ukusukela kumhla wokuhanjiswa ngaphakathi kweenyanga ezili-12, kwiimeko eziqhelekileyo, kunye nemiba esemgangathweni yeactuator esemgangathweni ebangelwe kukusilela ngomatshini okanye ukonakala, umzi-mveliso wethu unoxanduva lokugcina.
Ngaba i-FD13 actuator inokusetyenziswa ngaphandle komnyango?
Ewe imvula ilungile, kungangcono ukuba ingasetyenziswa phantsi kwamanzi.
2.Ngaba ndithenga isampulu yokuvavanya kuqala?
Ewe, 1 isampuli yamkelwe.
Malunga ne-FD1 kunye ne-FD13 actuator, yeyiphi eyona ilunge ngakumbi?
Ukuba uyisebenzisa emnyango, sicebisa ukuba usebenzise i-actuator ye-FD1, ubukhulu bayo. umthwalo ungama-6000N, ngokufanayo ne-FD13, ke kuyabiza kakhulu. Ukuba uyayisebenzisa ngaphandle komnyango okanye uyifuna ukuba ingangeni manzi, i-FD13 lukhetho olufanelekileyo, kodwa ixabiso lalo liphezulu kakhulu.
Egqithileyo Isantya esiKhawulezayo soMatshini weSilinda esisebenza ngombane FD9
Okulandelayo: Ukutshintsha kweenyawo ngeenyawo
Umgca weSilinda Actuator FD8
DC Linear Actuator Umbane FD1
Ulawulo lweBhedi yasesibhedlele, Isantya esiphezulu seLine Actuator, Umatshini wokuhambisa umbane omncinci, Ulawulo lweBhedi yonyango kude, Ulawulo lweBhedi yoMbane, Ulawulo lwe-Wireless Remote lweSibhedlele,